MB 2017 Jolay - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Jolay
Na dia tsy miresaka mivantana momba ny olan'ny saina sy ny vatana aza ny Baiboly, dia mirakitra firesahana mazava momba ny lafiny tsy ara-batana amin'ny fisian'ny olombelona ary manavaka (ao amin'ny teny filamatra ao amin'ny Testamenta Vaovao) ny vatana (vatana, nofo) sy fanahy (saina, fanahy). Ary na dia tsy manazava ny fomba ifandraisan’ny vatana sy ny fanahy aza ny Baiboly, na ny fomba ifandraisan’izy ireo marina, dia tsy mampisaraka azy roa ireo na manolotra azy ireo ho azo ovaina ary ny fanahy dia tsy miova ho ara-batana na oviana na oviana. Andininy maromaro no manondro ny “fanahy” tokana ao anatintsika ary mampiseho fifandraisana amin’ny Fanahy Masina izay milaza fa afaka manana fifandraisana manokana amin’Andriamanitra isika (Romana 8,16 ary 1. Korintiana 2,11).
Rehefa dinihina ny olan'ny vatana-saina dia zava-dehibe ny hanombohantsika amin'ny fampianarana fototra ao amin'ny Soratra Masina: Tsy hisy olombelona ary tsy ho toy ny inona izy ireo, mihoatra ny fifandraisana misy ankehitriny sy maharitra miaraka amin'ilay Andriamanitra Mpamorona tsy manam-paharoa, izay ny zavatra noforonina rehetra ary nitazona ny fisiany. Tsy hisy ny zavaboary (anisany ny olombelona) raha tafasaraka tanteraka aminy Andriamanitra. Ny famoronana dia tsy namorona ny tenany ary tsy nitahiry ny fisiany irery - Andriamanitra irery no misy (ny teolojianina dia miresaka momba ny maha-Andriamanitra azy). Ny fisian'ny zavaboary rehetra dia fanomezana avy amin'ilay Andriamanitra manana ny tenany.
Mifanohitra amin'ny fijoroana ho vavolombelona ao amin'ny Baiboly, ny sasany milaza fa ny olombelona dia tsy inona fa zavaboary ara-nofo. Ity fanambarana ity dia manangana ity fanontaniana manaraka ity: Ahoana no ahafahan'ny zavatra tsy dia lehibe loatra toy ny fahatsiarovan'olombelona mipoitra avy amin'ny zavatra tsy mahatsiaro tena toy ny zavatra ara-batana? Ny fanontaniana mifandraika amin'izany dia ny: Fa maninona no misy ny fahatsapana ny mombamomba ny fahatsapana mihitsy? Ireo fanontaniana ireo dia miteraka fanontaniana fanampiny raha ny fahatsiarovan-tena dia nofinofy fotsiny sa misy singa (na tsy ara-batana) mifandray amin'ny ati-doha, fa tsy maintsy avahana.
Saika ny rehetra no manaiky fa manana fahatsiarovan-tena ny olona (tontolon'ny eritreritra misy sary, fahitana ary fahatsapana) - izay matetika antsoina hoe ny saina ary tena misy amintsika toy ny filan'ny sakafo sy ny torimaso. Na izany aza, tsy misy fifanarahana momba ny natiora sy ny antony mahatonga ny fahatsiarovan-tena / saintsika. Ny materialista dia mihevitra azy io ho vokatry ny fiasa elektrokimika ao amin'ny ati-doha. Ireo tsy materialista (ao anatin'izany ny Kristiana) dia mahita izany ho toy ny fisehoan-javatra tsy hita maso izay tsy mitovy amin'ny ati-doha.
Ny vinavinany momba ny fahatsiarovan-tena dia tafiditra ao anatin'ny sokajy roa lehibe. Ny sokajy voalohany dia ny fizika (materialisme). Mampianatra izany fa tsy misy tontolo ara-panahy tsy hita maso. Ny sokajy hafa dia antsoina hoe dualisme parallèle, izay mampianatra fa ny saina dia mety hanana toetra tsy ara-batana na tsy ara-batana tanteraka, ka tsy azo hazavaina amin'ny fomba ara-batana ihany koa. Ny dualisme mifanila dia mihevitra ny ati-doha sy ny saina ho mifanerasera sy miasa mifanindran-dalana - rehefa maratra ny atidoha, dia mety ho simbaina ny fahaizana misaina lojika. Vokatr'izany dia voakitika ihany koa ny fifandraisana mifanindran-dàlana.
Raha ny dualism parallèle, ny teny hoe dualism dia ampiasaina amin'ny olombelona hanavaka ny fifandraisana azo jerena sy tsy hita maso eo amin'ny atidoha sy ny saina. Ny dingana ara-tsaina misaina izay mitranga tsirairay ao amin'ny olona tsirairay dia manana toetra manokana ary tsy azon'ny olon-kafa. Misy olon-kafa afaka mitana ny tanantsika, nefa tsy afaka mahita ny eritreritsika manokana izy ireo (ary matetika isika dia tena faly fa Andriamanitra no nandamina izany!). Fanampin'izany, ny filamatra olombelona sasany izay ankamamiantsika ao anatintsika dia tsy azo ampidinina ho anton-javatra ara-nofo. Ny idealy dia ny fitiavana, ny rariny, ny famelan-keloka, ny fifaliana, ny famindram-po, ny fahasoavana, ny fanantenana, ny hatsaran-tarehy, ny fahamarinana, ny hatsaram-panahy, ny fiadanana, ny asan'ny olombelona ary ny andraikitra - ireo dia manome tanjona sy dikany ny fiainana. Misy andinin-teny iray milaza amintsika fa ny fanomezana tsara rehetra dia avy amin’Andriamanitra (Jakoba 1,17). Afaka manazava amintsika ve izany ny fisian'ireo idealy ireo sy ny fikarakarana ny maha-olombelona antsika - ho fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olombelona?
Amin'ny maha-Kristiana antsika dia manondro ny asa tsy takatry ny saina sy ny fitaoman'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao isika; ao anatin'izany ny fihetsika nataony tamin'ny alàlan'ny zavatra noforonina (vokany voajanahary) na, mivantana kokoa, ny fihetsika nataony tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Koa satria tsy hita ny Fanahy Masina, dia tsy azo refesina ny asany. Saingy eo amin'ny tontolon'ny materialy no asany. Ny sangan'asany dia tsy azo vinavinaina ary tsy azo ahena ho rojom-pihetseham-po azo tsapain-tanana. Ireo sanganasa ireo dia tsy misy fotsiny ny famoronana nataon'Andriamanitra toy izany, fa koa ny Fahatongavana ho nofo, Fitsanganana amin'ny maty, fiakarana, ny fandefasan'ny Fanahy Masina ary ny fiverenan'i Jesosy Kristy ho amin'ny fahavitan'ny fanjakan'Andriamanitra ary koa ny fananganana ny lanitra vaovao ary ny tany vaovao.
Miverina amin'ny olan'ny vatana-saina: nilaza ny materialista fa azo hazavaina ara-batana ny fisainana. Ity fomba fijery ity dia manokatra ny mety, raha tsy ilaina, ny mamerina amin'ny laoniny ny saina. Hatramin'ny namoronana ny teny hoe "Artigence Intelligence" (AI), AI dia lohahevitra iray matoky ny mpamorona solosaina sy ny mpanoratra tantara foronina. Nandritra ny taona maro lasa, AI dia nanjary ampahany lehibe tamin'ny teknolojianay. Ny algorithm dia voarindra amin'ny karazana fitaovana sy milina rehetra, manomboka amin'ny telefaona finday ka hatramin'ny fiara. Ny fandrosoana ny rindrambaiko sy ny fitaovana dia nanao fandrosoana ka nandresy ny olona tamin'ny andrana lalao. Tamin'ny 1997, ny solosaina IBM Deep Blue dia nandresy ilay tompon-daka eran-tany amin'ny lalao échec Garry Kasparov. Niampanga an'i IBM ho mpisoloky i Kasparov ary nitaky valifaty. Manantena aho fa tsy nolavin'i IBM izany, saingy nanapa-kevitra izy ireo fa niasa mafy ilay masinina ary nandefa an'i Deep Blue hisotro ronono fotsiny. Tamin'ny 2011, ny Jeopardyuiz Show dia nampiantrano lalao teo amin'ny Watson Computer an'i IBM sy ireo mpilalao Jeopardy roa voalohany. (Raha tokony hamaly fanontaniana ireo mpilalao dia tokony hamolavola ireo fanontaniana amin'ny hafainganam-pandeha mba hanomezana valiny.) Very tamin'ny sisiny lehibe ireo mpilalao. Ny azoko lazaina fotsiny (ary ny tiako holazaina dia ny mampihomehy) fa Watson, izay niasa tamin'ny zavatra namboarina sy nalamina hatao fotsiny, dia tsy faly; fa ny rindrambaiko AI sy ny injenieran'ny fitaovana. Tokony hilaza zavatra amintsika izany!
Nilaza ny materialista fa tsy misy porofo manaporofo fa tsy mitovy ny saina sy ny vatana. Izy ireo dia milaza fa mitovy ny atidoha sy ny fahatsiarovan-tena ary amin'ny fomba hafa dia mipoitra ny saina avy amin'ireo dingana vita ao amin'ny atidoha na nipoitra avy amin'ny fahasarotan'ny dingana vita amin'ny atidoha. Iray amin'ireo antsoina hoe "atheista tezitra", Daniel Dennett, fa lasa lavitra ary nilaza fa fanoratana maloto izany. Ilay mpikaroka kristiana Greg Koukl dia manondro ny lesoka lehibe amin'ny fisainan'i Dennett:
Raha tsy misy tena fahatsapan-tena dia tsy hisy fomba hahafantarana fa izany dia illitation fotsiny. Raha ilaina ny fahatsiarovan-tena ny mahita tsinontsinona, dia tsy mety amina maso akory izany. Mitovy amin'izay ihany, ny olona iray dia afaka mahita ny tontolo roa, ny tena sy ny illusory, hahafantatra fa misy ny tsy fitoviana misy, ary vokatr'izany dia afaka mamantatra an'izao tontolo izao tsy takatry ny saina. Raha fanalam-baraka tanteraka ny fahatsapan-tena rehetra dia tsy ho afaka hamantatra azy io ny olona iray.
Ny immaterial dia tsy ho hita amin'ny alàlan'ny fomba ara-pitaovana (empirical). Ny fisehoan-javatra ara-nofo ihany no azo hamaritana, izay azo jerena, azo refesina, azo hamarinina ary azo averina. Raha misy zavatra azo porofoina ara-piraisana fotsiny dia tsy misy izay tsy manam-paharoa (tsy azo averina). Ary raha izany no izy, dia tsy misy ny tantara namboarina tamina fisehoan-javatra tsy manam-paharoa sy tsy azo averina intsony! Mety ho mety izany, ary ho an'ny sasany dia fanazavana tsy mitombina fa misy zavatra toa izany ihany izay azo tsikaritra amin'ny fomba manokana sy tiana kokoa. Raha fintinina, tsy misy fomba anaporofoana fa misy zavatra azo hamarinina / ara-nofo fotsiny! Tsy lojika ny mampihena ny zava-misy rehetra ho amin'izay mety ho hitan'ity fomba iray ity. Indraindray io fomba fijery io dia antsoina hoe siantifika.
Lohahevitra lehibe io ary vao mainka nosokiriko fa tena zava-dehibe ihany koa - jereo ny tenin'i Jesosy hoe: "Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy" (Matio. 10,28). Jesosy dia tsy materialista - nanavaka mazava ny vatana ara-batana (izay ahitana ny atidoha ihany koa) sy ny singa tsy ara-nofo amin’ny maha-olombelona antsika, izay tena fototry ny maha-olona antsika. Rehefa milaza amintsika i Jesosy mba tsy hamela ny hafa hamono ny fanahintsika, dia milaza koa izy fa tsy tokony hamela ny hafa hanimba ny finoantsika sy ny fitokiantsika an’Andriamanitra. Tsy afaka mahita an'Andriamanitra isika, fa mahafantatra sy matoky azy ary amin'ny alalan'ny fahatsiarovan-tena tsy ara-batana dia afaka mahatsapa na mahatsapa azy isika. Ny finoantsika an'Andriamanitra dia tena anisan'ny zavatra iainantsika.
Mampahatsiahy antsika i Jesosy fa ny saintsika dia ampahany lehibe amin’ny maha-mpianatra antsika. Ny fahatsiarovantsika dia manome antsika fahafahana hino ny Andriamanitra telo izay iray, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Manampy antsika hanaiky ny fanomezana ny finoana izany; Io finoana io dia “fahatokiana mafy ny amin’izay antenaina ary tsy fisalasalana amin’izay tsy hita.” (Hebreo 11,1). Ny fahatsiarovan-tenantsika no mahatonga antsika hahafantatra an’Andriamanitra amin’ny maha-Mpamorona azy sy hatoky Azy mba “hahafantarantsika fa ny Tenin’Andriamanitra no nahariana izao tontolo izao, ka izay rehetra hitantsika dia tonga tamin’ny tsy misy” (Hebreo). 11,3). Ny fahatsiarovan-tenantsika dia ahafahantsika miaina fiadanana izay ambony noho ny antony rehetra, mahafantatra fa Andriamanitra dia fitiavana, mino an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra, mino ny fiainana mandrakizay, mahafantatra ny tena fifaliana ary mahafantatra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa isika. .
Andao hifaly fa nomen'Andriamanitra saina isika hamantatra ny tontolo iainantsika sy azy.